Thola zonke izinto ezibalulekile ongazibona eVienna | Bezzia
Yini ongayibona edolobheni laseVienna
USusana Garcia | 26/05/2021 10:00 | Indlela yokuphila, travel
IVienna idolobha elihle kakhulu nenhle, ngentelezi nangobuciko obuhlaba umxhwele zonke izivakashi ezidlula kuyo. Inhlokodolobha yase-Austria iyasijabulisa ngezakhiwo zayo zomlando, amakhona ayo nezindawo zokudlela ezinhle zayo. Uma uthanda wonke amadolobha aseYurophu, nakanjani leli ngeke likushiye ungenandaba, ngoba linalo lelo khehla elidala elihlanganiswe nokuthinta okusha nobuciko okuphefumulelwa kuwo wonke amakhona alo nasemakhoneni alo.
La IVienna idolobha liyindawo efanele ukuvakashelwa. Sizobona ukuthi yiziphi izindawo zalo eziyinhloko zokuthakazelisa, kepha njenganoma iliphi elinye idolobha kufanele uzivumele uhambe uvakashele wonke amakhona uma kungenzeka, ngoba singahlala sithola izikhala ezimangalisayo. Zivumele uthathwe yinhle enkulu yaseVienna ohambweni lwakho olulandelayo.
1 Isigodlo saseSchönbrunn
2 Isigodlo saseHofburg
3 Umtapo Wezincwadi Kazwelonke wase-Austrian
4 IVienna Opera
6 idolobha Ipaki
Este isigodlo saziwa njengeVersailles yaseVienna, futhi akuyona engezansi ngokubukeka kwayo okuhle. Lesi sigodlo sakhiwa ngekhulu le-XNUMX kusayithi lendawo yokuzingela. Ngokuhamba kwesikhathi bekuzoba yindawo ehlobo yomndeni wobukhosi kuze kuphele ubukhosi ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX. Indawo okwakuyindawo futhi lapho kwakukhona iNdlovukazi uSissi eyayidumile. Uhambo oluqondiswayo lwasesigodlweni lungabhukwa ukuze ungaphuthelwa lutho emakamelweni akho, ujabulele lezi zingadi ezenziwe ngomzimba, futhi uthole ithikithi lokubona iMnyuziyamu Yezinqola Eziseduze nesigodlo.
Kutholakala enkabeni yomlando wedolobha sithola esinye isigodlo okufanele sivakashelwe, isigodlo saseHofburg. Kwaba iminyaka engaphezu kwamakhulu ayisithupha edlule yokuhlala komndeni wasebukhosini bakwaHabsburgs. Ngaphakathi esigodlweni ungavakashela amafulethi amadala ombuso, iminyuziyamu namasonto. I-Museum yaseSisi, enikezelwe empilweni ye-Empress eyaziwayo noma i-silverware yasenkantolo, ihlaba umxhwele ikakhulukazi.
Umtapo Wezincwadi Kazwelonke wase-Austrian
Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX Kungashiwo ukuthi ingenye yemitapo yolwazi emnandi kunazo zonke emhlabeni, ngakho-ke uma uthanda lolu hlobo lwesikhala akufanele uluphuthe. Emtatsheni wezincwadi singabona ukwakheka kwesitayela se-baroque, izithombe ezibunjiwe ezindala, izindwangu futhi iqoqo elikhulu kakhulu lezincwadi.
IVienna State Opera iyinkampani ye-opera eyaziwa kakhulu emhlabeni. IVienna Opera House yavulwa ngo-1869 njenge- Isakhiwo se-Renaissance, esine-Mozart. Ngo-1945 ibhomu lasilimaza kakhulu lesi sakhiwo futhi kwathatha iminyaka ukuphinde lisivule. Namuhla sisephambi kophawu lwangempela lomuzi, isakhiwo somlando esibaluleke kakhulu. Ungabona isakhiwo ngaphakathi futhi uthathe nezinkambo eziqondisiwe. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthenga amathikithi ashibhile emisebenzi, ngakho-ke kuyithuba elihle.
Yilokho imakethe eyaziwa kakhulu kuyo yonke iVienna futhi kwenziwa kusukela ngekhulu le-XNUMX. Kuyimakethe ejwayelekile lapho ungathola khona zonke izinhlobo zezitebele zokudla. Indawo enhle yokubona impilo yansuku zonke yabantu baseVienna nokuthenga ukudla kwasendaweni. Ngaphezu kwalokho, kunezindawo zokudla nezindawo zokudlela nezitebele, okwenza kube yindawo ekahle yokuma nokuzama izitsha ezijwayelekile.
El idolobha park, lavulwa ngekhulu le-XNUMX, ingenye yezindawo okufanele uye eVienna. Ipaki inesitayela sesiNgisi, esinetshe lesikhumbuzo kuJohan Strauss noma esakhiweni saseKursalon. Kule paki engamamitha-skwele angama-65.000 sizobona zonke izinhlobo zezikhala eziluhlaza nezitshalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Yini ongayibona edolobheni laseVienna
Izinwele ezilimele? Yibuyise nalezi zeluleko
Ukulala nomlingani wakho kuyasiza empilweni yengqondo